XOG: Dowlda Sacuudiga oo Dajisay Qorshe ay kusoo dhex galeyso Xiisada u dhaxeysa Somalia & Imaaraadka – XAMAR POST
XOG: Dowlda Sacuudiga oo Dajisay Qorshe ay kusoo dhex galeyso Xiisada u dhaxeysa Somalia & Imaaraadka
By Mohamed Ahmed On Apr 14, 2018
Dowlada Sacuudiga ayaa daboolka ka qaaday inay ka qeybqaadaneyso dhex dhexaadinta Khilaaf Siyaasadeedka u dhexeeya dowladaha Somalia iyo Sacuudiga.
Sacuudiga ayaa sheegay inay jiraan dhinacyo ka faa’iideysta Khilaafka dowladaha Islaamka, waxa ayna carab dhabtay inay wakhti badan galin doonaan xalinta Khilaafyada jira.
illo Diplomaasiyadeed ka tirsan Wasaarada arrimaha Dibadda Sacuudiga ayaa sheegay inay wadaan dadaal waliba oo leysugu soo dhaweynkaro labada dal, waxa uuna carab dhabay inay dhexdhexaad ka noqon doonaan khilaafka.
illo diplumaasiyadeedka waxa ay intaa ku darayaan in Boqorka sacuudiga, Salmaan Bin Cabdul Casiis uu wada kulansiin doono Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo oo maalmaha nagu soo aadan gaari doona magaalada Riyadha iyo Madax kale oo ka bixi doonta magaalada Abu Dabai oo ku wajahan Riyadh.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Imaaraadka Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ayaa laba maalin un ka hor Dacwad ka dhan ah dowlada Somalia u gudbiyay Boqorka Sacuudiga, Salmaan Bin Cabdul Casiis oo isaga Siyaasad ahaan aad ula dhacsan Imaaraadka.
Muranka Diplomaasiyadeed ee labada dal ayaa cirka isku shareeray, kadib markii ay Ciiddanka Ammaanka ee Garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Bishaan April 8­dii qabteen 9.6 million oo Dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta.
Saraakiisha NISA Gobolka Hiiraan oo isbedel lagu sameeyay
Wararkii ugu dambeeyay ee Ololaha doorashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka